बित्तिय संकटको सामना कसरी गर्ने ? तीन ओटा टिप्ससहित
काठमाडौं – यदि बर्ष २०२० ले हाम्रो लागि केही सिकाएको छ भने, त्यो हो एउटा बलियो मानिएको योजना पनि कमसल हुनसक्छ । चाहे हामी यो बिश्व महामारीको कुरा गरौं, मौसम परिवर्तन वा यन्त्रिकरण, जे सुकैले भनौं परिवर्तनको गति तिब्र रुपमा बढिरहेको छ। भबिस्य बिस्तारै अनिश्चित भइरहेको यो सन्दर्भमा हाम्रा बित्तीय योजनाका तरिकाहरु पनि सोही रुपमा परिबर्तन हुन जरुरी छ। सुरुवात गर्नका लागि तपाईं यी तीन रणनीतिहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ :–
१) त्यसमा केन्द्रीत हुनुहोस् जसलार्ई तपाईं नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ
तपाई त्यसमा केन्द्रीत हुनुहोस् जसलाई तपाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि तपाईं आफ्नो करियरको बाटो र मासिक आम्दानीलाई सधैं सहि प्रक्षेपण गर्न सक्नुहुन्, त्यही समयमा तपाईं आफ्नो ‘जानकार चिजहरु’ मा केन्द्रीत भएर आफ्ना भबिस्यका योजनालाई गतिलो जग दिन सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि यदि तपाईंसँग आफ्नो मासिक आम्दानी निश्चितता छैन भने तपाई आफ्नो मासिक खर्चका शिर्षकहरुको हिसाब राम्रो हुन । जस्तै, घरभाडा, किराना, शिक्षा, इन्स्योरेन्स प्रिमियम् र अन्य ।
यी जानकारी भएका खर्चहरुलाई तपाईंले प्रतिमहिना कम्तिमा कति आम्दानी गर्नुभयो ? भने आफ्नो अत्यावश्यक जीवनको मूल्य धान्न सक्नुहुन्छ भनेर पत्ता लागाउन प्रयोग गर्नुहोस् । अथवा यी डाटाहरुलाई तपाईंले कति महिना आफ्नो बचतबाट जीवन धान्न सक्नुहुन्छ यदि केहिगरी तपाईंको जागिर गयो वा नियमित आम्दानीमा बाधा आयो भने थाहा पाउन प्रयोग गर्नुहोस् ।
तपाईं आफ्नो कार्यक्षेत्रको भबिस्यलाई अथवा स्थानीय श्रमबजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न तर आज कति खर्च गर्ने र बचाउने भन्ने कुरालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ ।
२) कुरालाई कामले जित्ने योजना बनाउनुहोस्
तपाईंले केलाइ नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा तत्काल काम गरेर अघि बढ्ने (म यसो गर्छु भनेर योजना मात्रै बनाउने को बिपरित) अर्को प्रभावकारी रणनीति हुन सक्छ। जस्तै ‘म कुनै दिन एउटा घर किन्न चाहन्छु’ अथबा ‘म एउटा सफल करियर बनाउन चाहन्छु’ भन्नूको साटो तपाईं आफ्नो उद्देश्यलाई कार्यगत रुपमै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तै ‘म हरेक आफ्नो आम्दानीबाट नियमित ५ प्रतिशत बचाउछु । त्यसका लागि छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्न सुरु गर्नेछु । वा ‘हरेक महिना कम्तीमा १० नयाँ जागिरका लागि अप्लाइ गर्नेछु’।
यस्ता कार्यगत योजना निश्चित, तत्काल र बिशिष्ट मात्रै हुदैनन्, यिनिहरुले प्रगतिको लागि अन्य ढोकाहरु समेत खोल्छन् ।
३) खराब समयको बारेमा सोच र पूर्बतयारी
जीवनको सबैभन्दा कठिन र नराम्रो समयका लागि पहिलै सोचेर पूर्वतयारी गर्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। आफ्नो जागिर गुमाउनु, घर गुमाउनु वा स्वास्थ्यमा समस्या आउनु जस्ता अनिश्चित र अपरझट आइपर्ने अबस्थाका लागि बनाइने उपयुक्त योजनाले तपार्इँलाई यस्ता अवस्थाबाट पार लगाउन सक्छन् ।
जस्तै कोभिडको यो महामारीको समयमा उपयुक्त बित्तिय योजना बनाएका मानिसहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको खर्चका शिर्षकहरु कटाएर आफूलाई अर्को संकटबाट बचाएका छन् । यसरी उपर्युक्त बित्तिय योजनाले तपाईंलाई अगाडि आइपर्ने जुनसुकै अबस्थाका लागि तयार पार्दछ। सक्सेस् म्याग्जीनको सहयोगमा